भोल्टेयरबाट उत्कृष्ट उद्धरणहरू - Victor Mochere
François-Marie Arouet, आफ्नो कलम नाम भोल्टेयर द्वारा चिनिन्छ, एक फ्रान्सेली प्रबुद्ध लेखक, इतिहासकार, र आफ्नो बुद्धिको लागि प्रसिद्ध दार्शनिक, ईसाई धर्म को उनको आलोचना - विशेष गरी रोमन क्याथोलिक चर्च - र दासत्व, साथै उनको स्वतन्त्रता को वकालत को लागी प्रसिद्ध थियो। भाषण, धर्मको स्वतन्त्रता, र चर्च र राज्यको अलगाव। भोल्टेयर एक बहुमुखी र प्रख्यात लेखक थिए, जसले नाटक, कविता, उपन्यास, निबन्ध, इतिहास, र वैज्ञानिक प्रदर्शनहरू सहित लगभग हरेक साहित्यिक रूपहरूमा कामहरू उत्पादन गरे।
उनले २०,००० भन्दा बढी पत्र र २,००० पुस्तक र पर्चाहरू लेखे। उनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रसिद्ध र व्यावसायिक रूपमा सफल हुने पहिलो लेखक थिए। उहाँ नागरिक स्वतन्त्रताको एक मुखर अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो र क्याथोलिक फ्रान्सेली राजतन्त्रको कडा सेन्सरशिप कानूनबाट निरन्तर जोखिममा हुनुहुन्थ्यो। उनको विवादास्पद असहिष्णुता, धार्मिक कट्टरपन्थी र उसको समयका फ्रान्सेली संस्थाहरूलाई व्यंग्यात्मक रूपमा व्यंग्य गरियो। उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध काम र म्याग्नम ओपस, क्यान्डाइड, एक उपन्यास हो जसले उसको समयका धेरै घटनाहरू, विचारकहरू र दर्शनहरूमा टिप्पणी, आलोचना र उपहास गर्दछ।
भोल्टेयरका केही उत्कृष्ट उद्धरणहरू तल सूचीबद्ध छन्।
"एउटी सुन्दर महिलाले माया गरेको मानिस सधैं समस्याबाट मुक्त हुन्छ।" - भोल्टेयर
"राज्य बनाइएको नागरिकहरू भन्दा राम्रो हुन सक्दैन। हाम्रो श्रम अब राज्यलाई ढाल्ने होइन नागरिक बनाउने हो। - भोल्टेयर
"एक मजेदार भनाइले केहि प्रमाणित गर्दैन।" - भोल्टेयर
"सबै सम्भव संसारमा सबै भन्दा राम्रोको लागि हो।" - भोल्टेयर
"सबै मानिस नाक र दश औंला लिएर जन्मेका हुन्छन्, तर कोही पनि ईश्वरको ज्ञान लिएर जन्मेका छैनन्।" - भोल्टेयर
"सबै मानिसहरु प्रकृति द्वारा स्वतन्त्र छन्; तसर्थ जब तपाईं चाहानुहुन्छ निस्कने स्वतन्त्र स्वतन्त्रता छ, तर सीमाहरू पार गर्न धेरै र ठूलो कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्नेछ।" - भोल्टेयर
"पुरुषका सबै तर्कहरू महिलाको एक भावनाको लायक छैनन्।" - भोल्टेयर
"मानिसमा जनावरहरूका यी फाइदाहरू छन्: तिनीहरूले घडीको हड्ताल कहिल्यै सुन्दैनन्, तिनीहरू मृत्युको कुनै पनि विचार बिना नै मर्छन्, तिनीहरूलाई निर्देशन दिने कुनै धर्मशास्त्रीहरू छैनन्, तिनीहरूको अन्तिम क्षणहरू अप्रिय र अप्रिय समारोहहरूले विचलित गर्दैनन्, तिनीहरूको अन्त्येष्टिमा उनीहरूलाई केही खर्च हुँदैन, र कसैले पनि आफ्नो इच्छामा मुद्दा चलाउँदैन।" - भोल्टेयर
"प्रशंसा एक अद्भुत कुरा हो। यसले अरूमा जे उत्कृष्ट छ त्यो हाम्रो पनि हो।” - भोल्टेयर
"हरेक सफल पुरुषको पछाडि एउटी अचम्मित सासु हुन्छिन्।" - भोल्टेयर
"मानिसहरूलाई अधिक व्यावहारिक बनाउन असमर्थ भएकोले, म तिनीहरूबाट टाढा रहन रुचाउँछु।" - भोल्टेयर
"आन्तरिक सुरक्षा' शब्दहरूबाट सावधान रहनुहोस्, किनकि तिनीहरू उत्पीडकको अनन्त पुकार हुन्।" - भोल्टेयर
"सत्य खोज्नेहरूको कदर गर तर भेट्टाउनेहरूदेखि होसियार रहनुहोस्।" - भोल्टेयर
"सामान्य ज्ञान त्यति सामान्य छैन।" - भोल्टेयर
"आफ्नो लागि सोच्ने हिम्मत गर्नुहोस्।" - भोल्टेयर
"पुस्तकहरूको ठूलो परिमाणको बावजुद, कति थोरै मानिसहरूले पढ्छन्! र यदि कसैले लाभदायक रूपमा पढ्यो भने, एक व्यक्तिले महसुस गर्नेछ कि अश्लील बथान हरेक दिन निल्न कति मूर्ख चीजहरू छन्।" - भोल्टेयर
“कलह मानवजातिको ठूलो रोग हो; र सहिष्णुता यसको एकमात्र उपाय हो। ” - भोल्टेयर
"डाक्टरहरूले उनीहरूलाई थोरै थाहा हुने औषधीहरू शरीरमा राख्छन् जसको उनीहरूलाई कम थाहा हुन्छ जसको उनीहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन।" - भोल्टेयर
"पैसाले सबै कुरा गर्छ वा पैसाको लागि सबै कुरा गर्न लाग्दैछ भनेर नसोच्नुहोस्।" - भोल्टेयर
"शङ्का एक असहज अवस्था हो, तर निश्चितता एक हास्यास्पद अवस्था हो।" - भोल्टेयर
"प्रत्येक खेलाडीले जीवनले उसलाई वा उनको व्यवहार गर्ने कार्डहरू स्वीकार गर्नुपर्छ; तर एकचोटि तिनीहरू हातमा पुगेपछि, खेल जित्नको लागि कसरी कार्ड खेल्ने भन्ने निर्णय उसले एक्लै गर्नुपर्छ।" - भोल्टेयर
"प्रत्येक मानिस जुन उमेरमा बाँच्दछ त्यसको एक प्राणी हो र थोरैले आफूलाई समयको विचारभन्दा माथि उठाउन सक्षम छन्।" - भोल्टेयर
"हरेक मानिस उसले नगरेको सबै असलको लागि दोषी छ।" - भोल्टेयर
"विश्वास भनेको कारणले नसक्ने कुरामा विश्वास गर्नु हो।" - भोल्टेयर
"मूर्खहरू प्रतिष्ठाको लेखकमा सबै कुराको प्रशंसा गर्छन्।" - भोल्टेयर
"मूर्खहरूलाई विश्वास गर्ने बानी हुन्छ कि प्रसिद्ध लेखकले लेखेका सबै कुरा प्रशंसनीय छन्। मेरो तर्फबाट म आफूलाई खुसी पार्न मात्र पढ्छु र मेरो स्वाद अनुरूप मात्र मन पर्छ।" - भोल्टेयर
"आत्मविज्ञानका चार हजार खण्डहरूले हामीलाई आत्मा के हो भनेर सिकाउँदैन।" - भोल्टेयर
"परमेश्वरले हामीलाई जीवनको उपहार दिनुभयो; आफूलाई राम्रोसँग बाँच्ने उपहार दिनु हामीमा निर्भर छ।" - भोल्टेयर
"परमेश्वर एक सर्कल हुनुहुन्छ जसको केन्द्र सर्वत्र छ र परिधि कतै छैन।" - भोल्टेयर
"भगवान एक हाँस्य कलाकार हो जुन दर्शकहरूलाई खेल्न पनि डराउँछन्।" - भोल्टेयर
"उनी धेरै अज्ञानी हुनुपर्छ किनभने उसले सोधिने हरेक प्रश्नको जवाफ दिन्छ।" - भोल्टेयर
"इतिहास भनेको संसारको अपराधको अध्ययन हो।" - भोल्टेयर
"इतिहास कहिल्यै दोहोरिदैन। मानिसले सधैं गर्छ।" - भोल्टेयर
"म संसारको सबैभन्दा राम्रो स्वभावको प्राणी हुँ, र अझै पनि मैले तीन जनालाई मारेको छु, र यी तीन मध्ये दुई जना पुजारी थिए।" - भोल्टेयर
"म कल्पना गर्न सक्दिन कि ब्रह्माण्डको घडीकार्य घडी निर्माता बिना कसरी हुन सक्छ।" - भोल्टेयर
"म कहाँ जाँदैछु थाहा छैन, तर म मेरो बाटोमा छु।" - भोल्टेयर
"म महिलाहरूलाई घृणा गर्छु किनभने उनीहरूलाई सधैं थाहा छ कि चीजहरू कहाँ छन्।" - भोल्टेयर
"मैले खुशी हुन रोजेको छु किनभने यो मेरो स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ।" - भोल्टेयर
"मैले असी वर्षको जीवन बाँचेको छु र यसको लागि केही थाहा छैन, तर राजीनामा दिनुहोस् र आफैलाई भन्नुहोस् कि झिँगाहरू माकुराले खानको लागि र मानिस दुःखले निल्नको लागि जन्मन्छ।" - भोल्टेयर
"मैले भगवानलाई एउटै प्रार्थना मात्र गरेको छैन, धेरै छोटो प्रार्थना: हे प्रभु, मेरा शत्रुहरूलाई हास्यास्पद बनाउनुहोस्। र भगवानले दिनुभयो।" - भोल्टेयर
"म आफैलाई सय पटक मार्न चाहान्छु, तर म अझै पनि जीवनको मायामा छु। यो हास्यास्पद कमजोरी सायद हाम्रो सबैभन्दा मूर्ख उदास प्रवृत्ति मध्ये एक हो, किनकि एक बोझ बोक्दै जान उत्सुक हुनु, आफ्नो अस्तित्वलाई घृणा गर्न र अझै पनि यसलाई दृढतापूर्वक समात्न, स्नेह गर्न उत्सुक हुनु भन्दा मूर्खता के छ? हाम्रो मन नखाएसम्म हामीलाई निल्ने सर्प?" - भोल्टेयर
"म मेरो मौलिक विचारलाई दृढतापूर्वक राख्छु। आखिर म दार्शनिक हुँ।" - भोल्टेयर
"मलाई धेरै किताबहरू थाहा छ जसले आफ्ना पाठकहरूलाई दिक्क पारेको छ, तर मलाई त्यस्तो कुनै पनि थाहा छैन जसले वास्तविक खराब काम गरेको छैन।" - भोल्टेयर
"म तिम्रो खुट्टामा सुत्न र तिम्रो काखमा मर्न चाहन्छु।" - भोल्टेयर
"म मेरो आफ्नै प्रजातिको दुई सय मुसाहरू भन्दा, आफैं भन्दा धेरै बलियो, राम्रो सिंहको आज्ञा मान्छु।" - भोल्टेयर
"आइसक्रिम उत्कृष्ट छ। कस्तो दुखको कुरा यो अवैध छैन।" - भोल्टेयर
"यदि परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो भने, हामीले बदला भन्दा बढी छ।" - भोल्टेयर
"यदि भगवान अवस्थित छैन भने, यो आविष्कार गर्न आवश्यक थियो।" - भोल्टेयर
"यदि अन्य ग्रहहरूमा जीवन छ भने, पृथ्वी ब्रह्माण्डको पागल शरण हो।" - भोल्टेयर
"यदि यो सम्भव संसारको सबैभन्दा राम्रो हो भने, अरू के हो?" - भोल्टेयर
"यदि हामीले केहि धेरै राम्रो पाउन सकेनौं, कम्तिमा हामीले केहि नयाँ पाउन सक्छौं।" - भोल्टेयर
“तपाईको देशमा दुई धर्म छ भने दुईले एकअर्काको घाँटी काट्नेछन्; तर यदि तीस धर्महरू छन् भने, तिनीहरू शान्तिमा बस्नेछन्।" - भोल्टेयर
"यदि तिमी असल कानुन चाहन्छौ भने तिमीसँग भएकालाई जलाएर नयाँ बनाऊ।" - भोल्टेयर
"हरेक प्रान्तमा, प्रमुख पेशाहरू, महत्वको क्रममा, प्रेम निर्माण, दुर्भावनापूर्ण गफ र बकवास कुरा हुन्।" - भोल्टेयर
"सामान्यतया, सरकारको कला भनेको नागरिकको एक पक्षबाट सकेसम्म धेरै पैसा लिएर अर्कोलाई दिनु हो।" - भोल्टेयर
"अन्त्यमा अन्यायले स्वतन्त्रता उत्पन्न गर्छ।" - भोल्टेयर
"के राजनीति जानाजानी झुट बोल्ने कला बाहेक केहि होइन?" - भोल्टेयर
"यो मानव आत्माको शिशुको अन्धविश्वास हो कि कुमारीत्वलाई सद्गुण मानिनेछ न कि ज्ञानबाट अज्ञानतालाई अलग गर्ने बाधा।" - भोल्टेयर
"संगीत अनुवाद गर्न जति असम्भव छ, कविता अनुवाद गर्न असम्भव छ।" - भोल्टेयर
"निर्दोषको निन्दा गर्नु भन्दा दोषीलाई बचाउने जोखिम लिनु राम्रो हो।" - भोल्टेयर
"यो स्पष्ट छ कि एक व्यक्ति, उसको भाइलाई सताउने व्यक्ति, किनभने ऊ एउटै विचारको छैन, त्यो राक्षस हो।" - भोल्टेयर
"स्थापित अधिकारीहरू गलत भएका विषयमा सही हुनु खतरनाक हुन्छ।" - भोल्टेयर
"नराम्रो किताबको मात्रा बढाउनु भन्दा चुपचाप बस्नु धेरै राम्रो हो।" - भोल्टेयर
"मार्न निषेध गरिएको छ; त्यसैले सबै हत्याराहरूलाई दण्ड दिइन्छ जबसम्म तिनीहरूले ठूलो संख्यामा र तुरहीको आवाजमा मार्दैनन्।” - भोल्टेयर
"मूर्खहरूलाई तिनीहरूले सम्मान गर्ने साङ्लाहरूबाट मुक्त गर्न गाह्रो छ।" - भोल्टेयर
"यो प्रेम हो; प्रेम, मानव जातिको आराम, ब्रह्माण्डको रक्षक, सबै संवेदनशील प्राणीहरूको आत्मा, प्रेम, कोमल प्रेम।" - भोल्टेयर
"यो जित्न पर्याप्त छैन; लोभ गर्न सिक्नु पर्छ।" - भोल्टेयर
"यो असमानता होइन जुन वास्तविक दुर्भाग्य हो, यो निर्भरता हो।" - भोल्टेयर
“एक पटकभन्दा दुई पटक जन्मनु अचम्मको कुरा होइन; प्रकृतिमा भएका सबै कुरा पुनरुत्थान हो।" - भोल्टेयर
‘कामको सुन्दरता हेर्न र जान्न मात्र पुग्दैन। हामीले महसुस गर्नुपर्छ र त्यसबाट प्रभावित हुनुपर्दछ। ” - भोल्टेयर
"यो भनिन्छ कि भगवान सधैं ठूला बटालियनहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ।" - भोल्टेयर
"यो पुरुषहरूसँग जस्तै किताबहरूसँग छ: धेरै सानो संख्याले ठूलो भूमिका खेल्छ।" - भोल्टेयर
“मानिसलाई आमाको गर्भमा रहेको तरकारी अवस्थाबाट र आफ्नो प्रारम्भिक बाल्यकालको शुद्ध पशु अवस्थाबाट तर्कको परिपक्वता देखा पर्न थालेको अवस्थामा पुग्न बीस वर्ष लाग्छ। तिनको संरचनाबारे अलिकति जान्न तीस शताब्दीको आवश्यकता छ। उहाँको आत्माको बारेमा केही सिक्नको लागि अनन्तता चाहिन्छ। उसलाई मार्न एकैछिन लाग्छ।" - भोल्टेयर
"मानिसलाई उसको जवाफबाट भन्दा उसको प्रश्नबाट न्याय गर्नुहोस्।" - भोल्टेयर
"हाम्रो बगैचा खेती गरौं।" - भोल्टेयर
"हामी पढौं, र नाचौं; यी दुई मनोरञ्जनहरूले संसारलाई कहिल्यै हानि गर्दैनन्।" - भोल्टेयर
"विचारको स्वतन्त्रता आत्माको जीवन हो।" - भोल्टेयर
"जीवन एउटा जहाज डुबान हो, तर हामीले लाइफबोटमा गाउन बिर्सनु हुँदैन।" - भोल्टेयर
"जीवन काँडाहरूले छरिएको छ, र मलाई चाँडै ती पार गर्नु बाहेक अरू कुनै उपाय थाहा छैन। हामी हाम्रो दुर्भाग्यमा जति लामो समयसम्म बस्छौं, हामीलाई हानि गर्ने तिनीहरूको शक्ति त्यति नै ठूलो हुन्छ।” - भोल्टेयर
"प्रेम प्रकृति द्वारा सुसज्जित र कल्पना द्वारा कढ़ाई एक क्यानभास हो।" - भोल्टेयर
"सत्यलाई प्रेम गर्नुहोस्, तर त्रुटिलाई माफ गर्नुहोस्।" - भोल्टेयर
"पागलपन भनेको क्रमशः धेरै चीजहरू धेरै छिटो सोच्नु हो, वा एक चीजको धेरै विशेष रूपमा।" - भोल्टेयर
"मानिस उसले चाहेको क्षणमा स्वतन्त्र हुन्छ।" - भोल्टेयर
"विवाह भनेको डरपोकको लागि खुला एक मात्र साहसिक कार्य हो।" - भोल्टेयर
"भगवानले मलाई मेरा मित्रहरूबाट बचाउन सक्नुहुन्छ: म मेरा शत्रुहरूबाट आफूलाई बचाउन सक्छु।" - भोल्टेयर
"ध्यान भनेको शाश्वत चेतना वा वस्तुविना शुद्ध चेतनामा विचारहरूको विघटन हो, बिना सोचाइ जान्नु, अनन्ततामा परिमितता विलय गर्नु हो।" - भोल्टेयर
"पुरुष समान छन्; यो जन्म होइन सद्गुण हो जसले फरक पार्छ।" - भोल्टेयर
"पुरुषहरूले तर्क गर्छन्। प्रकृतिले काम गर्छ।" - भोल्टेयर
"पुरुषहरूले आफ्नो अन्यायको लागि मात्र विचारलाई अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्छन्, र आफ्नो विचार लुकाउनको लागि मात्र बोली प्रयोग गर्छन्।" - भोल्टेयर
"पुरुषहरू सधैं पागल हुनेछन्, र जसले उनीहरूलाई निको पार्न सक्छ भन्ने सोच्नेहरू सबै भन्दा पागल हुन्छन्।" - भोल्टेयर
"अनुहार भन्दा मन अझै फरक छ।" - भोल्टेयर
"मेरो आत्मा ब्रह्माण्डको ऐना हो, र मेरो शरीर यसको फ्रेम हो।" - भोल्टेयर
"कुनै पनि विचार आफ्नो छिमेकीलाई जलाउन लायक छैन।" - भोल्टेयर
"कुनै पनि समस्याले दिगो सोचको आक्रमणलाई सहन सक्दैन।" - भोल्टेयर
"हिमपहिरोमा कुनै पनि हिमपातले कहिल्यै जिम्मेवार महसुस गर्दैन।" - भोल्टेयर
"अब, अब मेरो असल मानिस, यो शत्रु बनाउने समय होइन।" - भोल्टेयर
"सबै धर्महरूमा, ईसाईहरूले पक्कै पनि सबैभन्दा सहिष्णुतालाई प्रेरित गर्नुपर्छ, तर अहिले सम्म ईसाईहरू सबै मानिसहरू भन्दा असहिष्णु थिए।" - भोल्टेयर
"एउटा सधैं सरलबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि जटिल आउँछ, र उच्च ज्ञानद्वारा प्रायः अन्तमा सरलमा फर्किन्छ। यो मानव बुद्धिको पाठ्यक्रम हो।" - भोल्टेयर
"एक दिन सबै ठीक हुनेछ, यो हाम्रो आशा छ। आज सबै ठिक छ, त्यो हाम्रो भ्रम हो।" - भोल्टेयर
"शब्दहरूको एक ठूलो प्रयोग भनेको हाम्रा विचारहरू लुकाउनु हो।" - भोल्टेयर
"कविताको एउटा गुणलाई थोरै व्यक्तिहरूले अस्वीकार गर्नेछन्: यसले गद्य भन्दा धेरै र कम शब्दहरूमा बोल्छ।" - भोल्टेयर
"तपाईंका साथीहरूले मात्र तपाईंको किताबहरू चोर्छन्।" - भोल्टेयर
"विचारले हाम्रो यो सानो संसारमा प्लेग वा भूकम्प भन्दा धेरै रोगहरू निम्त्याएको छ।" - भोल्टेयर
"आशावाद भनेको सबैभन्दा खराब हुँदा सबै कुरा राम्रो हुन्छ भनेर कायम राख्ने जिद्दी हो।" - भोल्टेयर
"मौलिकता न्यायपूर्ण अनुकरण बाहेक केहि होइन। सबैभन्दा मौलिक लेखकहरूले एक अर्काबाट उधारो लिए। - भोल्टेयर
"हाम्रो चरित्र हाम्रा विचारहरू र हाम्रा भावनाहरूबाट बनेको हुन्छ: र, यो प्रमाणित भइसकेको छ कि हामी आफैलाई न त भावनाहरू दिन्छौं न विचारहरू, हाम्रो चरित्र हामीमा निर्भर हुँदैन। यदि यो हामीमा निर्भर थियो भने, त्यहाँ कोही पनि छैन जो सिद्ध नहुनेछ। यदि कसैले चिन्तन गर्दैन भने, उसले आफूलाई सबै कुराको मालिक ठान्छ; तर जब कसैले चिन्तन गर्छ, उसले महसुस गर्छ कि ऊ कुनै पनि चीजको मालिक होइन।" - भोल्टेयर
"हाम्रो परिश्रमले हामीलाई तीन ठूला खराबीहरूबाट जोगाउँछ - थकान, दुर्गुण र अभाव।" - भोल्टेयर
"हाम्रो अभागी जात यसरी बनेको छ कि कुल्चिलो बाटोमा हिड्नेहरूले नयाँ बाटो देखाउनेलाई सधैं ढुङ्गा हानेछन्।" - भोल्टेयर
"सिद्ध भनेको असलको शत्रु हो।" - भोल्टेयर
"पूर्णता ढिलो डिग्री द्वारा प्राप्त हुन्छ; समयको हात चाहिन्छ।" - भोल्टेयर
"पूर्वाग्रह भनेको मूर्खहरूले तर्कको लागि प्रयोग गर्ने हो।" - भोल्टेयर
"पढाइले आत्मालाई पोषण दिन्छ, र एक प्रबुद्ध मित्रले यसलाई सान्त्वना दिन्छ।" - भोल्टेयर
"पहिलो बदमासले पहिलो मूर्खलाई भेटेपछि धर्म सुरु भयो।" - भोल्टेयर
"सार्वजनिक विपत्तिहरू भन्दा गोप्य शोकहरू धेरै क्रूर हुन्छन्।" - भोल्टेयर
"कामुक सुख बितेर जान्छ, तर हामी बीचको मित्रता, आपसी विश्वास, हृदयको आनन्द, आत्माको मोह, यी चीजहरू नष्ट हुँदैनन् र कहिल्यै नष्ट हुन सक्दैनन्।" - भोल्टेयर
"त्यसो भए मानवीय अवस्था यस्तो छ, कि आफ्नो देशको महानताको कामना गर्नु भनेको छिमेकीलाई हानि पुर्‍याउनु हो।" - भोल्टेयर
"आँसु शोकको मौन भाषा हो।" - भोल्टेयर
"औषधिको कलाले रोगीलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दछ जबकि प्रकृतिले रोग निको पार्छ।" - भोल्टेयर
"धनीहरूको आराम गरिबको प्रशस्त आपूर्तिमा निर्भर गर्दछ।" - भोल्टेयर
"सत्यको खोज र असल कुराको अभ्यास दर्शनका दुई मुख्य उद्देश्य हुन्।" - भोल्टेयर
"जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो सान्त्वना भनेको मानिसले के सोच्दछ भन्नु हो।" - भोल्टेयर
"सबैभन्दा खुशीको जीवन व्यस्त एकान्त हो।" - भोल्टेयर
"हृदयको आफ्नै कारणहरू छन् जुन कारणले बुझ्न सक्दैन।" - भोल्टेयर
"मानव मस्तिष्क एउटा जटिल अंग हो जसमा मानिसलाई उसले विश्वास गर्न चाहेको कुरामा विश्वास गरिरहने कारणहरू खोज्न सक्षम बनाउने अद्भुत शक्ति हो।" - भोल्टेयर
"असीमित रूपमा सानोको गर्व असीम रूपमा ठूलो हुन्छ।" - भोल्टेयर
"हामीले किताबहरूमा पाएको निर्देशन आगो जस्तै हो। हामी यसलाई हाम्रा छिमेकीहरूबाट ल्याउँछौं, यसलाई घरमा जलाउँछौं, अरूलाई सञ्चार गर्छौं, र यो सबैको सम्पत्ति बन्छ।" - भोल्टेयर
"मैले कुनै कुरामा विश्वास गर्न चाहने रुचि त्यस्तो चीज अवस्थित छ भन्ने प्रमाण होइन।" - भोल्टेयर
"जति लामो समयसम्म हामी हाम्रो दुर्भाग्यमा बस्छौं, हामीलाई हानि गर्ने उनीहरूको शक्ति त्यति नै ठूलो हुन्छ।" - भोल्टेयर
“ऐना एउटा बेकार आविष्कार हो। आफूलाई साँच्चै हेर्ने एक मात्र तरिका अरूको आँखाको प्रतिबिम्बमा छ।" - भोल्टेयर
"मानिसलाई जति धेरै थाहा हुन्छ, उ कम बोल्छ।" - भोल्टेयर
"जति धेरै पढ्छु, जति धेरै सिक्छु, त्यति नै म निश्चित छु कि मलाई केही थाहा छैन।" - भोल्टेयर
"जति धेरै पटक मूर्खता दोहोर्याइएको छ, त्यति नै यसले बुद्धिको रूप पाउँछ।" - भोल्टेयर
"तपाईले लिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय भनेको राम्रो मुडमा हुनु हो।" - भोल्टेयर
"हृदयले गनगन गर्दा मुखले नराम्रो कुरा मान्छ।" - भोल्टेयर
"गणितज्ञहरूले अनन्तता भनेको के हो भनेर बुझ्ने एकमात्र तरिका भनेको मानव मूर्खताको हदसम्म मनन गर्नु हो।" - भोल्टेयर
"आनन्दको खोजी हरेक तर्कसंगत व्यक्तिको लक्ष्य हुनुपर्छ।" - भोल्टेयर
"बोर हुनुको रहस्य भनेको सबै कुरा बताउनु हो।" - भोल्टेयर
"धर्मशास्त्र भनेको धर्म हो जुन विष खानामा हुन्छ।" - भोल्टेयर
"त्यहाँ सत्यहरू छन् जुन सबै मानिसहरूको लागि होइन, न त सबै समयको लागि हो।" - भोल्टेयर
"धोका दिन बोल्नु र अभेद्य भएर चुप लाग्नुमा धेरै फरक छ।" - भोल्टेयर
"आफ्नो लागि सोच्नुहोस् र अरूलाई पनि त्यसो गर्ने विशेषाधिकारको आनन्द लिन दिनुहोस्।" - भोल्टेयर
"जसले तपाईंलाई मूर्खतामा विश्वास दिलाउन सक्छ, उनीहरूले तपाईंलाई अत्याचार गर्न सक्छन्।" - भोल्टेयर
"कलम समात्नु भनेको युद्धमा हुनु हो।" - भोल्टेयर
"संसारमा सफल हुनको लागि यो मुर्ख हुनु पर्याप्त छैन - एक विनम्र पनि हुनुपर्छ।" - भोल्टेयर
"जिउँदोहरूलाई हामी आदर गर्छौं, तर मरेकाहरूलाई हामी केवल सत्यको ऋणी छौं।" - भोल्टेयर
"अनिश्चितता एक असहज स्थिति हो। तर निश्चितता एक बेतुका हो। ” - भोल्टेयर
"हामी सबै खुशी खोज्छौं, तर कहाँ पाउन सकिन्छ भनेर थाहा छैन: मदिराहरू जस्तै जो आफ्नो घर खोज्छन्, मन्द रूपमा थाहा छ कि तिनीहरूसँग एउटा छ।" - भोल्टेयर
"हामी एक्लै हुँदा बिरलै गर्व गर्छौं।" - भोल्टेयर
"हामी सभ्यताका हाम्रा सबै विचारहरूको लागि स्कटल्याण्डलाई हेर्छौं।" - भोल्टेयर
"हामी कहिल्यै बाँच्दैनौं; हामी सधैं बाँच्ने आशामा छौं।" - भोल्टेयर
"हामी न शुद्ध, न बुद्धिमान, न असल; हामीले थाहा पाएको राम्रो गर्छौं।" - भोल्टेयर
"तिमीलाई के भन्न सक्छौ एक मानिस जसले तपाईलाई भन्छ कि उसले मानिसहरु भन्दा भगवानको आज्ञा मान्न रुचाउँछ, र फलस्वरूप उसले तपाईको घाँटी काट्यो भने ऊ स्वर्ग जाने निश्चित छ?" - भोल्टेयर
"इतिहास के हो? झूट जसमा सबै सहमत छन्। ” - भोल्टेयर
"सहनशीलता भनेको के हो? यो मानवताको परिणाम हो। हामी सबै कमजोरी र त्रुटिबाट बनेका छौं; एक अर्काको मूर्खतालाई पारस्परिक रूपमा माफ गरौं - यो प्रकृतिको पहिलो नियम हो।" - भोल्टेयर
"तिमी जे गर्छौ, कुख्यात कुरालाई कुचल्नुहोस्, र तपाईलाई माया गर्नेहरूलाई माया गर्नुहोस्।" - भोल्टेयर
"जससँग बोल्छ उसले बुझ्दैन, र आफै बोल्नेले बुझ्दैन, त्यो मेटाफिजिक्स हो।" - भोल्टेयर
"जब यो पैसा को प्रश्न हो, सबै एकै धर्म को हुन्।" - भोल्टेयर
"मेरो यात्राले जहाँ पनि लैजाओस्, म जहाँ छु त्यहीँ स्वर्ग हो।" - भोल्टेयर
येशू ख्रीष्टबाट उत्कृष्ट उद्धरणहरू
सुत्दा के हुन्छ